Xtensio: Abuur, maamul, soona bandhig Iskuduwahaaga Hal-abuurka ah | Martech Zone
Xtensio: Abuur, maamul, soona bandhig Isuduwahaaga Hal-abuurka ah
Xtensio waa istaraatiijiyad calaamadeysan iyo xarun isgaarsiineed halkaas oo ururradu ka fuliyaan oo ay ka abaabulaan dadaallada suuqgeynta kooxda gudaha, macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha. Dhis oo la wadaag wax dammaanad ah oo aad u baahan tahay tifaftiraha. Wax soo saarkaaga ayaa la qabsanaya sida mashruucaagu isu beddelayo. Haddii aad isku dubarideyso olole ballaaran oo olole ah, hagaajinta isgaarsiinta gudaha, ama aad abuureyso warbixinno iyo daraasad kiis, Xtensio waa halka shaqada kooxdaadu ku socoto.
Abuur Iskuduwaha Suuqgeynta Sumadda leh Iyadoo Aanu Naqshadeeye Ahayn
Iyadoo Xtensio, kooxdaadu waxay ka dhisi kartaa wax kasta shakhsiyaadka istiraatiijiga ah ee macaamiisha, soo jeedinta, qorshooyinka xayeysiinta iyo bogagga degitaanka iyadoo la adeegsanayo fudeydka dhise web. Ka dib si dhakhso leh oo fudud dib u cusbooneysiin, cusbooneysii una shakhsiyeeyo waxyaabaha ku jira ololayaasha kala duwan. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah:
Waqti ku badbaadi naqshadeynta - Qof kasta oo kooxda ka mid ah wuxuu noqdaa naqshadeeye. Jiid oo hoos u dhig qaabab is-dhexgal ah - muuqaal, muuqaal, jaantusyo, jaantusyo. Beddel midabka, asalka ama cabbirka. Isku hagaaji qaabka aad u baahan tahay.
Si wax ku ool ah u calaamadee wax soo saar - Ku qeex tilmaamaha qaabka kooxdaada iyadoo ay ku qoran tahay xarfaha shirkaddaada iyo midabka midabka leh si aad ugu xirto sumadda kooxda oo dhan. Habee xiriiriyeyaasha la wadaago oo ku dar ereyada sirta ah si ay dammaanaddaada hay'adeed u noqoto mid gaar ah oo ammaan ah.
Fududee wada shaqeynta kooxda - Si wada jir ah uga wada shaqee koox ahaan waaxyaha iyo maaraynta. Dhammaan isbeddelada waa la keydiyaa oo la isku wada habeeyaa dhammaan qalabka. Qof walba markasta wuu cusbooneysiiyaa oo sanduuqaaga sanduuqa waa qasab la'aan.
Waxaan u baahanahay inaan yeelano a meel wada shaqeyn, iyo sidoo kale waxay u baahan tahay inaan u soo bandhigno macluumaadka kuwa kale. Waagii hore, waxaan u adeegsanay Asana inaan wada shaqeyno, iyo PowerPoint si aan ugu bandhigno daneeyayaasha kale. Xtensio wuxuu badalay baahida labadaba si cajiib ah. Waan wada shaqeyn karnaa, isla markiiba wadaagi karnaa adigoon kuu soo dirin lifaaqyo markaa u baahan tahay inaad keydiso noocyo kala duwan oo leh magacyo u gaar ah - dhammaantiin waad ogtihiin daloolintaas - ka dibna isticmaal aalad isku mid ah si aad u soo bandhigto.
David Nason, Agaasimaha Guud / Aasaasaha HireBrain
Soo bandhig, Wadaag, oo Soo Deg Dejintaada
Si loo fududeeyo wadashaqeynta lala yeesho go'aan qaadayaasha dibadda ama macaamiisha, Xtensio wuxuu siiyaa awood uu:
La wadaag weblink toos ah - U dir dammaanad muhiim ah sida isku xirka webka ee la beddeli karo. Ku dar ilaalinta erayga sirta ah. Looma dirin doono lifaaqyo badan iyo noocyo leh cusboonaysiin kasta dukumiinti.
Soo bandhig muqaal dijitaal ah - Hal guji, folio-kaaga ayaa isu rogaya muqaal dijitaal ah. Meelkasta ka soo bandhig jawi is dhexgal iyo is dhexgal ah. Qeyb kasta oo ka mid ah folio-ka waxay noqoneysaa slide.
Soo dejiso faylka PDF ama PNG - Si kasta oo aad isugu daydo inaad si buuxda ugu gudubto dijitaalka, dammaanadda qaar ayaa u baahan doonta in lagu keydiyo sidii nuqul adag. Dhoofiso dhammaan folio-kaaga ama shakhsiyaadka shaqsiyadeed sida PDF ama faylasha PNG
Si gaar ah ugu calaamadee Goob-shaqo Wakaaladdaada iyo Macaamiisha
Xtensio ee Ganacsiga waxay bixisaa goob shaqo oo gaar loo leeyahay oo calaamadeysan oo isku xireysa horumarkaaga, wax soo saarkaaga, iibkaaga iyo kooxaha maareynta macluumaadka ay u baahan yihiin.
Si fudud u qaabee wax soo saarista - Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed ee suuqgeynta dhagaystayaasha kala duwan iyo meheraddu way fududahay. U kaydso wixii folio ah tusaale ahaan qaab kooxdaada ah si aad dib ugu isticmaasho marar badan. Xitaa waad ku daabici kartaa boggaaga si aad u dhisto astaantaada.
Qofwalbo ha safnaado - Ku abaabulo mashaariicdaada iyo dukumintiyadaada kanaal - olole, waax, macmiil, warbixinno, iwm. Ku dar wada shaqeyn ama la wadaag xiriiriyaha kanaalka si qof walba uu u helo marinka uu u baahan yahay, markuu u baahan yahay.
Had iyo jeer la soco wixii ku soo kordha - La soco socodka shaqada kooxdaada adoo adeegsanaya ogeysiisyo-app ah iyo raad-raaca la-socodka stio folio. Waxaad awoodi doontaa inaad hagaajiso nidaamkaaga waxtarka isla markaana aad ogaato fursadaha kobaca cusub.
Saxiix Xtensio ee Ganacsiga
Maktabadda Xtensio Template
Waxaad had iyo jeer ku bilaabi kartaa shaashad maran ama waxaad u adeegsan kartaa tusaalooyinka iyo ilaha Xtensio marxaladaha kala duwan ee hirgelinta istiraatiijiyaddaada koritaanka - laga soo qaadista daahfurnaanta macaamiishaada ku habboon iyo suuqa wax soo saarka ku habboon si loo abuuro soo jeedinno iyo garoonno ama layliyo istiraatiijiyad gudaha ah, warbixinnada iibka iyo ganacsiga kale dammaanad.
Shaacinta: Waxaan nahay Xtensio ku xiran.
Tags: dhis dammaanad khadka tooska ahmaareynta dammaanaddaarrimo hal abuur lehshaqo abuur hal abuur lehkireysiga maskaxdadib u eegis hal abuur leh oo khadka tooska ah laga sameeyonaqshadeeye pdf onlinebandhig onlineqorsheeyaha soo jeedinta khadka tooska ahxtensio
Waa maxay Naqshadaynta Jawaabtu? (Fiidiyow Sharax iyo Muuqaal)